KUTHENI UKYLIE JENNER KUNYE NOBUDLELWANE BUKADRAKE KUXELWA UKUBA 'BUNZIMA' NGAPHANDLE KOLUVO LWABO 'LOKUDIBANA' - UBONISO
Emva kwepati yomhla wokuzalwa kaDrake wama-33 ngo-Okthobha u-2019, amarhe amaninzi acebisa ukuba uncamathele kuKylie Jenner. Umntu oneminyaka engama-22 ubudala
Emva kwepati yokuzalwa ka-Drake yama-33 ngo-Okthobha u-2019, uninzi Amahemuhemu abonisa Isinamathiselo somqokeleli kuKylie Jenner. Umntu oneminyaka engamashumi amabini anesibini ubudala we-makeup mogul uxelwe ukuba wangena ezihlokweni njengoko kubonakala ukuba bobabini babencamathele esinqeni.
Le nto ineenkwenkwezi ibonakala ngathi iphakamisa ukuba iimvakalelo ziyafana. Kwaye, imithombo ibango lokuba ababini kubo bachitha ixesha kunye kwezothando.
umzingeli x umzingeli uqalise kwakhona
Kodwa, impendulo kaJenner yakhawuleza yalahla amahemuhemu ukongeza ukuba, uKylie akabonakali ngathi uyathandana. Ubona uDrake ngamanye amaxesha, kodwa ayibonakali imbi.
Ngaphandle koku khanyela, imithombo ilandela ngenzondelelo uDrake, kunye nobudlelwane bukaKylie njengoko uthando lwabo omnye komnye lubonakala luyinyani. Zombini zingena komnye komnye; enyanisweni, bezisoloko zikho.
Ngaba uKylie Jenner noDrake bayathandana?
Njengoko uKylie ahlukana kubudlelwane bakhe kunye noTravis Scott, kuyatsho ukuba nguye ukuchitha ixesha kunye noDrake .
Bobabini baye babelana ngezihlandlo ezithile ezisondeleyo. Nokuba ubudlelwane babo bothando abuqinisekiswanga, kodwa bobabini bachitha ixesha elininzi kunye.
UKylie noDrake babalekele amahemuhemu okuthandana ngokucebisa ukuba ngabahlobo nje abakhulu. Abahlobo ixesha elide, uDrake ukwasondele kakhulu kusapho lukaKylie. Bahlala ngokusondeleyo komnye nomnye, nto leyo eyomeleza unxibelelwano lwabo. UDrake noKylie bayaxhasana.
Umthombo utyhile ukuba uDrake wayezigcine iimvakalelo zikaJenner, nangona ubudlelwane babo bungekho nzulu. Ingxelo iyaqhubeka yongeza ukuba uDrake noKylie abafuni ukubeka esichengeni ubuhlobo babo ngokuwela nayiphi na imida ephambili.
Iqhawe lam lezemfundo isizini 3 isiqendu 23
Ubume bobudlelwane bukaKylie noDrake bunzima. Ukwahlukana kukaKylie kunye noTravis Scott (esi sibini sabelana ngentombi, uStormi) naye uyayeka ukunxibelelana nolwalamano lwakhe noDrake ekubeni yiyo nantoni na ekhonkrithi.
Kwenzeka ntoni phakathi kwabo kwitheko likaDrake?
Abangaphakathi baqaphela ukuba i-duo yabelana ngexesha elimnandi kunye kunye nosuku olukhulu lukaDrake. Kwaye, ukutsala kwabo omnye komnye akuzange kubonwe. UDrake uhlekisa ngeenxa zonke, kwaye uKylie uyavuya. Esi sibini sasibonakala sikhululekile omnye komnye.
UDrake ubona ukuncokola noJenner noCorey Gamble kangangexesha elithile ethekweni. Kulo lonke ipati, uDrake noKylie babonakala bengabelani ngokucacileyo kodwa unxibelelwano olucokisekileyo.
loluphi usuku ungulo ufikayo
Ngokucacileyo, uDrake akafuni kunciphisa ubuhlobo bakhe obunzulu noJenner emva kwamahemuhemu obudlelwane. Kwelinye lamabali akhe e-Instagram, uDrake uthi, Into yokugqibela endifuna ukuyenza kukuvuka ndinabahlobo bam baziva bengahlonitshwa, ke kuye kwafuneka nditsho ukuba ndiqale usuku.
UJenner noDrake kuthiwa bahlangana kwi2013, xa uKylie wayeneminyaka eyi-16. UDrake naye wenza itheko lokuzalwa likaKylie lonyaka wokuzalwa. Ukusukela ngoko, esi sibini sabelana ngezihlandlo ezininzi zobuhlobo. Oku kunokuba kwabangela iimvakalelo zothando omnye komnye.
Ubudlelwane bukaDrake noKylie ngokungathandabuzekiyo bungaphezulu kweplatonic. Ubume bobudlelwane babo buyanzima ngaphandle kokwabelana ngeemvakalelo ezifanayo. Ngelixa isibini sinamahemuhemu okuba sithandane kwi-2019, kodwa akukho namnye kubo ekufuneka aqinisekise ngesibini esithandanayo.
liphuma nini ixesha elilandelayo lawo onke american
ngokukhawuleza nangomsindo 9 kwi-netflix
Uhlaselo olutsha kwixesha lesine 4
ixesha le-2 unetflix
ukuba uthanda i-rick kunye ne-morty
Indoda enye yenqindi yexesha 2 yomhla wokukhutshwa